किन बिरोध भैरहेको छ सोसियल सेक्युरिटी फन्डको ? - Laltin.com
किन बिरोध भैरहेको छ सोसियल सेक्युरिटी फन्डको ?
laltin tech media June 27, 2021
असार १३ आइतवार, २०७८ (काठमाडौं)–
शोसियल सेक्युरिटी फन्ड अर्थात योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा असन्तुष्टि र अन्योलता देखिएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमिकको तर्फबाट आधारभूत पारिश्रमिक (बेसिक तलब) को ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेर निर्माण हुन्छ ।सो कोषबाट श्रमिकलाई औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य, मातृत्व, दुर्घटना, अशक्तता, वृद्धावस्था, आश्रति परिवार सुरक्षा योजना उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको कार्यक्रम हो । नेपालमा नौ लाखभन्दा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्। ती प्रतिष्ठानमा ३४ लाखभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत छन्।
निवृत्तिभरण (पेन्सन) सम्बन्धी ब्यबस्था
वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा २८.३३ प्रतिशतमध्ये २० प्रतिशत रकम पेन्सन र ८.३३ प्रतिशत रकम अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा गरिन्छ । पेन्सन पाउन उमेर साठी वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १८० महीना योगदान गरेको हुनुपर्दछ ।
पेन्सन योजनामा जम्मा भएको रकम र कोषले गरेको लगानीको प्रतिफल समेतको कुल योगलाई १६० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम जीवनकालभर मासिक निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था छ । १८० महीनाको योगदान नगर्दै साठी वर्ष उमेर पूरा भएको अवस्थामा त्यसमा जम्मा भएको रकम एकमुष्ट लिने वा पेन्सन मध्ये एउटा विकल्पको छनोट गर्न सक्ने र सुविधा प्राप्त गर्ने उमेर नपुग्दै मृत्यु भएमा हकवालालाई उक्त रकम प्रदान गरिने व्यवस्था छ ।
तर केही प्राबधानका कारणले पेन्सन योजनामा असन्तुष्टि रहेको पाइन्छ :
(१) ६० वर्ष नपुग्दै १८० महीना योगदान गरेमा पेन्सन पाउन ६० वर्षको उमेरसम्म पर्खिनुपर्ने भन्ने देखिन्छ । जुन व्यावहारिक रूपमा उचित मान्न सकिंदैन ।
(२) पेन्सन प्राप्त गर्न शुरू गरेपछि १८० महीना पेन्सन नपाउँदै मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी नभएको वा पेन्सन पाउने अवस्था नभएमा मृतकको पति वा पत्नीलाई पेन्सनको ५० प्रतिशत रकम मासिक पेन्सन प्रदान गरिने व्यवस्था छ। आफैंले जम्मा गरेको रकममा किन ५० प्रतिशत मात्र पाउने व्यवस्था राखियो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
(३) योगदानकर्ताको विवाह नै नभएको र मृत्यु भएमा कसैले पनि नपाउने देखियो ।
(४) योगदानकर्ताको मृत्यु हुनुअगावै वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद भए कसैले पनि नपाउने देखियो ।
(५) पेन्सन बापत आउने भन्दा कम तलबको वैकल्पिक रोजगारी भए पेन्सन पाउनकै लागि रोजगारी छाड्नुपर्ने भयो वा पेन्सनको जम्मा भएको
रकम त्यसै गुम्ने देखियो ।
(६) पति-पत्नी दुवै योगदानकर्ता भएमा एउटाको मृत्यु भएमा जीबित पार्टनरले सो बापतको पेन्सन नपाउने भयो ।
यी र यस्तै प्रकारका अन्यौलताको कारण पोटेन्सियल योगदानकर्ताहरुले बिरोध गरिरहेका छन। उता श्रम ऐनले अनिवार्य रूपमा रोजगारदाता सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। श्रम ऐन अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोष संचालनमा आएपछि संचय कोष, उपदानको रकम सामाजिक सुरक्षा कोष बाहेक अन्यत्र जम्मा गर्न सक्ने देखिंदैन तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम जम्मा नगरेमा क्षतिपूर्ति र दोब्बर हर्जाना भराउने गरी श्रम कार्यालयले आदेश दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा बापतको ३१ प्रतिशत रकम त जसरी पनि छुट्याउनै पर्ने हुन्छ । तर, कोषमा सूचीकृत नभएको श्रमिकको रकम कोषमा जम्मा गर्न नमिल्ने र संचयकोष, नागरिक लगानी कोषमा समेत श्रम ऐनको व्यवस्थाको कारणले जम्मा गर्न नमिल्ने भएकोले समस्या देखिएको छ।
Previous: लकडाउनले घर न घाटको बनायो
Next: स्थानीयद्वारा कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाको तीब्र विरोध